Video:-Ninkii Nabi Maxamed CSW lagu sheegay oo hadlay iyo Culumada Somaliyed oo Fadwo kasoo saaray – Idil News
Video:-Ninkii Nabi Maxamed CSW lagu sheegay oo hadlay iyo Culumada Somaliyed oo Fadwo kasoo saaray
Maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn loo hadal hayay nin la sheegay in uu saxaafada usoo bandhigay sawir uu ku sheegay in uu yahay Nabi Maxamed, Naxariis iyo nabad gelyo korkiisa ahaatee.
Kumannaan qof ayaa si kala duwan uga hadlay hadalka ninkaas, waxaana sidoo kale ka hadlay culimmada Soomaalida,hoos ka daawo muuqaalka.
Waxaa la sheegay in ninkaasi uu joogo Magaalada Gaalkacayo,gaar ahaan qaybta koonfureed ee Baraxley oo uu gacanta ku hayo maamulka Cadaado.
Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha Diinta ee maamulkaas ,ayaa amartay in ninkaasi la soo xiro lana horkeeno sharciga,hoos ka daawo muuqaalka shirka jaraa’id ee Wasiirka Diinta iyo Awqaafta uu ku amray soo qabashada ninkaas..
Halkan ka daawo muuqaalka amarka maaamulka Cadaado
Dhanka kale Maxkamad ku taala Koonfurta Gaalkacyo ayaa sheegtay in dembi lagu waayay ninkaasi lagu eedeeyay in uu Sawir meel yaalla ku tilmaamay Nabi Maxamed (SCW).
Garsooraha maxkamaddaas, Shiikh Maxamed Macallim Cali ayaa BBC-da u sheegay in ninka la eedeeyay oo lagu magacaabo Shiikh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare uu maxkamadda hor yimid oo su’aalo la waydiiyay, markii dambana la fasaxay.
Garsooraha maxkamadda Koonfurta Gaalkacyo, Shiikh Maxamed Macallin Cali ayaa sheegay in Wasiirka Diinta ee maamulka Cadaado uu ku degdegay arrin uusan la socon.
Dhanka kale Shiikha sawirkiisa lasoo qaatay ee Cabdiweli Cilmi Yare uu ku sheegay in uu yahay Nabi Maxamed CSW,ayaa saxaafada la hadlay,waxuuna si cad iskaga beri yeelay tilmaanta lagu sheegay.
”Anigu Nabi ma sheegan shaqo kuma lihi qolada sawirkayga soo bandhigtay,diintaydu waa islaam Nabigaygu waa Maxamed”ayuu yiri Shiikh Bilaw,hoos ka daawo muuqaalka Shiikh Bilaw oo ka hadlay sawirkiisa la isticmaalay.
Halkan ka daawo muuqaalka Shiikh Bilaw
Dhanka kale qayb ka mid ah Culimada Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay ninka soo bandhigay sawirka uu ku sheegay Nbai Maxamed NNKH ee ku sugan magaalada Gaalkacyo,kaasoo lagu magacaabo C/wali Shiikh Cali Cilmi Yare.
Guddoomiyaha mid ka mid ah Hey’addaha Culimada Soomaaliyeed Shiikh Bashiir Axmed Salaad oo bayaanka ay Culumadaas kasoo saareen Cabdiweli Shiikh Cilmi Yare iyo Gafka uu gaystay Suubanaheena Nabi Maxamaed NNNKH,ayaa sheegay in Cabdiweli uu ka baxay Diinta islaamka.
Sidoo kale Shiikh bashiir waxuu ku daray hadalkiisa isagoo sii wata in ninkan uu meel kaga dhacay xurmadii Nabigeena CSW, waxaana uu ka codsaday maamulka Cadaado iyo Dawlada Fadraaalka in ninkaas sharciga la marsiiyo,hoos ka daawo muuqaalka shirka jaraa’id ee Culumada bayaanka kasoo saartay Muqdisho.
Halkan ka daawo muuqaalka Culumada